Kugqame ithalente elicashile kwiBig Brother Mzansi
UTerry Isithombe: TWITTER
Mbali Khanyile | March 26, 2022
KUVELE ithalente ebelicashile ezimbangini zesifazane emncintiswaneni weBig Brother ngenkathi kusuka umsindo phakathi kukaTerry noThato kodwa bezingazelele izimbangi zabesilisa, ngoLwesibili emini.
Yize bebelingisa isikeshi laba abesifazane, okubalwa kubo uMpho kanjalo noGash1, kuqale kwashaqisa bonke abesilisa abahlala kule ndlu kanjalo nababukeli obekwenzeka ngenkathi kuqophisana uTerry noThato.
Ubungaze ufunge ukuthi yingxabano yangempela ngenkathi uTerry obehlanza indlu ethola ijazi lomkhwenyana athe belivimbile ethoyilethi futhi usola ukuthi belisetshenziswa yile ntokazi nesoka layo uGash 1.
Yize kuqale kwabukeka sengathi kushubile kugcine sekukhona abasola ukuthi laba badlala isikeshi.
Izimbangi zesilisa ebezingenalo nhlobo ulwazi ngalesi sikeshi eziqale zathuswa yilezi zintokazi, zilishayele ihlombe ithalente lazo ngemuva kokuthola ukuthi bekudlalwa.
Ngeledlule uBig Brother akaxoshanga muntu endlini yakhe kodwa unike inselelo uThato, Tamara, Thulz noThemba yokuthi bangenele umqhudelwano weBig Brother Mzansi Ultimate Veto Power, okugcine kunqobe uThemba kuwo.
Phakathi kwababalwa ohlwini lwabangase bakhonjwe indlela kusasa kulolu hlelo olukhonjiswa wuMzansi Magic ( 161) ngo-7 ntambama kubalwa uThato, Gash1, Mpho, Terry noTamara.